ကမ္ဘာကျော် မော်ဒယ်Kendall Jenner နဲ့ဆုံရလို့ ပျော်နေတဲ့ M ဆိုင်းလု | Duwun
သူမက Holly Wood ကို အလည်ရောက်ရှိနေတာပါ။
Mဆိုင်းလုက ကမ္ဘာကျော် မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kendall Jenner နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အမှတ်တရအကြောင်းတွေပြောပြလာပါတယ်။ Idol နဲ့တွေ့မှ အရပ်ပုသွားတယ်လို့ ဟာသနှောရင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
Photo: M ဆိုင်းလု
မော်ဒယ်မလေး M ဆိုင်းလုတစ်ယောက် New York မြို့မှာ လည်ပတ်ရင်း ကမ္ဘာကျော်မော်ဒယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ အကြိုက်ဆုံးမော်ဒယ်လည်းဖြစ်တဲ့
Kendall Jenner နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရလို့ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေပါတယ်။
‘’While in Hollywood! LA ရောက်ရောက်ချင်း မထင်မှတ်ပဲ ဆိုင်းလူ ရဲ့ favourite model kendall နဲ့ဆုံလိုက်ရတယ် အမှတ်တရလေးတခုပါပဲ။ very unexpected meet with kendall jenner !!!!!!! မမျှော်လင့်ဘဲ lunch စားဖို့ order လုပ်တုန်း ဆိုင်းလု ရဲ့ favourite model နဲ့ဆုံလိုက်ရတယ်။သူနဲတွေ့မှဘဲ ကိုယ်ဟာတော်တော်ပုပါလား လို့’’ ဆိုပြီးတော့ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီ ၅၉ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Mဆိုင်းလုဟာ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်စေ၊ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဖြစ်စေ ခရီးတွေ မကြာခဏ ထွက်ဖြစ်သူပါ။ အခုလည်း ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ Holly Wood ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Holly Wood ဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်များစွာတို့ နေထိုင်ကြတဲ့ နေရာ ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။
M ဆိုင်းလုကိုတော့ တီဗီကြော်ငြာတွေကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေ စတင်သိရှိခဲ့တာပါ။ သူမကိုတော့ အများအားဖြင့် Fashion Show ပွဲတွေမှာ မြင်တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းကလည်း မနည်းတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Mဆိုင်းလုဟာ Model တစ်ယောက်အနေနဲ့သာ အခုချိန်ထိ ရပ်တည်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။